Manova ny varotrao amin'ny alàlan'ny fomba maro kambana | Martech Zone
Manova ny varotrao amin'ny alàlan'ny fomba maro kambana
Zoma, Oktobra 10, 2014 David Blume
Nasaina handray anjara amin'ny dinika farany nataoko tao amin'ny Conference Management Productivity Sales Association an'ny Sales Management any Atlanta aho. Nifantoka tamin'ny Sales Transformation ity fivoriana ity, izay naneho ny heviny sy ny heviny momba ny fomba fanao tsara indrindra sy ny antony mahomby amin'ny fahombiazana ny mpikarakara.
Ny iray amin'ireo teboka ifanakalozan-kevitra voalohany dia nanandrana namaritra ilay teny. Inona ny fanovana varotra? Be loatra ve ny fampiasana azy ary mety hyped? Ny marimaritra iraisana iraisana dia fa, tsy toy ny fahombiazan'ny varotra na fahazoan-dàlana, izay misy ny famaritana sy ny fandikana azy amin'ny ankapobeny, ny fanovana varotra dia miteraka fanitsiana ara-pitaovana ny orinasam-pivarotana vs fanovana kely miampy fanatsarana ny fahombiazana.
Fitaovana amin'ity toe-javatra ity dia mazàna hisy fiatraikany amin'ny lafin-javatra marobe amin'ny fikambanana, ao anatin'izany:
Ny paikadim-barotra eny an-tsena (fantsona, marketing, vokatra, vidiny, mpihaino kendrena)
Ny fotodrafitrasa manohana (ops amin'ny varotra, fizotran'ny teknolojia)
Antony misy ifandraisany amin'ny olona toy ny fahaizana mivarotra sy ny drafi-karama
Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, ny tetik'asa fanovana dia mihanaka amin'ny ezaka mandritra ny 1-2 taona ary afaka mampiharihary fikambanana iray amin'ny loza mitatao amin'ny fizotrany. Ohatra, na dia iharan'ny fanovana aza ny fikambanana iray, dia mbola tazonina ihany izy ireo hahatratra ny tanjona isam-bolana. Eritrereto ho toy ny manandrana manova ny kodiarana amin'ny fiaranao raha mbola mitondra fiara ianao. Olana iray hafa sendra orinasa maro miaraka amina tetik'asa mandritra ny taona maro ny fahafaha-mitarika ireo mpamily orinasa ao ambadiky ny fanovana hiova, mety hahatonga ny vokany tsy hisy dikany!
Inona no tena manosika ny fanovana ao anatin'ny fikambanana mpivarotra?
Ny tontonana dia namantatra tamin'ny ankapobeny ny anton-javatra roa lehibe ao ambadiky ny fanovana: ivelany sy anatiny. Ny lafin-javatra ivelany dia misy ny zavatra toy ny fanovana ny fividianana, ny fiovan'ny teknolojia ary ireo miditra vaovao mifaninana. Ny vokatra vaovao, ny fanakambanana ary ny fahazoana ary ny fanovana ny fitantanana dia maneho ny anton-javatra anatiny. Nanaiky ny tontonana fa ny fiovan'ny fihetsiky ny mpividy dia iray amin'ireo antony manosika indrindra amin'ny fanovana.
Ny fiovana amin'ny fitondran-tena mividy dia famantarana iray amin'ny:
Ny fampitomboan'ny mpividy fampahalalana
Fandraisana anjara betsaka amin'ireo mpandray anjara amin'ny fanapahan-kevitry ny orinasa (izay matetika amin'ny marimaritra iraisana)
Mavitrika kokoa ny vondrona mpividy
Ireo mpividy dia mampitombo ny fanantenana amin'ny mpivarotra amin'ny fampitomboana ny fahaizany sy ny traikefany hanafainganana ny vokatra eo amin'ny orinasa
Ho an'ny orinasam-pivarotana maro, fangatahana lehibe ny fanovana ny fivarotana. Rehefa dinihina tokoa, izahay dia miresaka momba ny fanovana ny fomba fivarotana reps mpivarotra, izay midika fa ny fanovana ny fitondran-tena mivarotra efa raiki-tampisaka. Mety ho sarotra ny manomboka ary vao mainka sarotra tohina. Raha heverinao ny fanandramana teo aloha hampiorina ny fanovana ao anatin'ny orinasam-pivarotana (angamba amin'ny alàlan'ny programa fanofanana na amin'ny alàlan'ny fampidirana teknolojia vaovao, ny iray amin'ireo antony mahazatra indrindra tsy ahombiazan'izy ireo dia noho ny tsy fahombiazan'ny fananganana mpivarotra.
Fa maninona no tsy mandray teknolojia ny herin'ny varotra?
Satria vitsy ny mpitondra varotra no mametraka ny tenany amin'ny kiraron'ny mpivarotra ary mamaly ny fanontaniana Inona no ao anatiny ho ahy? Raha tsy mahita lanja mivantana amin'ny fanovana ny fomba fanaovany asa ny rep mpivarotra dia fotoana fohy fotsiny vao hiverina amin'ny fahazarana taloha izy ireo.
Izy io dia miara-miasa amin'ny finoana matanjaka iray hafa izay matetika tsy raharahina: ny mpitantana ny varotra dia ampahany lehibe amin'ny vahaolana. Ny mpitantana ny varotra dia tsy maintsy mahay sy mahay mifampiresaka ary manamafy ny fanovana ampiharina. The Nahoana izany hoe ny antony manosika ao ambadiky ny fanovana dia singa iray lehibe.
Fa ity ny fikosehana. Na dia fantatry ny repoblika aza ny antony manosika azy, raha toa ka sarotra loatra ny manova ny fitondran-tena sy manadino azy - na ny famenoana ny drafitry ny kaonty, ny fanavaozana ny rafitra CRM na ny fanarahana dingana hafa - dia mety hanjary faminaniana mahafa-po anao izany ary ianao ' miverina amin'ny kianja iray alohan'ny hahalalanao azy. Ity no iray amin'ireo antony nitaterana fa ny 87% amin'ny fahalalana rehetra zaraina amin'ny programa fanofanana dia hadino na tsy raharahina aorian'ny 30 andro.
Raha ampifangaroina bebe kokoa io, dia tsy refy iray habe mihitsy mifanaraka amin'ny scenario rehetra. Ny fampiharana ny dingana rehetra, ny fianarana na ny teknolojia dia toe-javatra tanteraka. Sarotra izany. Ahoana ny fomba ampanaovanao ny mpiray antoka tsirairay amin'ny fomba misy heviny? Ny resaka dia misy fiantraikany amin'ny:
Amin'iza ianao no mivarotra
Amin'ny sehatry ny indostria inona
Hiatrehana izay takiana amin'ny orinasa
Manohitra izay mpifaninana
Inona no hataon'ny mpitondra varotra?
Tsy misy bala volafotsy. Ny fomba fiasa misy kofehy maro no filanao tsara indrindra. TSY maintsy mampianatra ianao, mila mampianatra, mila mampiditra dingana vaovao ary manolotra atiny vaovao, mila manome fitaovana vaovao ianao, manitsy ny faritany ary ny drafitra comp sns ... Saingy mitoka-monina ireo mpampiasa vola ireo raha toa ka mitoka-monina. . Tokony hotarihina amin'ny fampisehoana izy ireo. Ny fanofanana dia nohamafisina tamin'ny coaching mahomby. Fomba fanohanan'ny atiny sy fitaovana mahomby. Ary azo ampifanarahana daholo mba hiantohana ny reps hanamboatra ny fomba fanaony isaky ny toe-javatra mivarotra.
Tags: mividy toetrafanovana fanampinyFanamafisana ny varotrafahombiazan'ny varotrafanitsiana ny varotrapaikady varotrafanovana varotra
David no filoha lefitra misahana ny fiaraha-miasa stratejika Qvidian, tompon'andraikitra amin'ny fitantanana ny fandraisana mpiasa sy ny fitomboan'ny mpiara-miasa stratejika an'ny orinasa. David dia niavaka tamin'ny sehatry ny fahombiazan'ny varotra amin'ny sehatra toy ny fitantanana tambin-karama sy ny automatisation de proposition.
Serivisy mpandika teny sy mpandika teny rehetra
Oct 12, 2014 amin'ny 2: 11 AM
Amin'ny varotra, tena zava-dehibe ny mifandray amin'ny tsenanao kendrena ary mampahafantatra azy ireo ny zava-dehibe na dia misy fetrany amin'ny fifandraisana aza. Amin'ny fandefasana ny hafatrao amin'ny mpihaino anao dia hanana vintana tsara kokoa ho an'ny ROI ianao.